IPL : पन्जाब प्ले-अफको कति नजिक ? कुन टिमको प्ले-अफ समीकरण के छ – WicketNepal
WicketNepal Staff, २०७७ कार्तिक ११, मंगलवार १७:२२
युएईमा जारि आईपीएल २०२० मा हालसम्म रोचक क्रिकेट देख्न पाइएको छ। सनसनीपूर्ण खेलहरु, सुपर ओभर, उत्कृस्ट क्याच, फिल्डिंग, विस्फोटक ब्याटिंग तथा धारिलो बलिंग सबै यो सिजन देख्न पाइएको छ। सिजन अन्त्य तिर जाँदै गर्दा लिग रोमान्चक बन्दै गएको छ। खेलेको सबै संस्करणमा प्ले-अफ पुगेको चेन्नाई इतिहासमै पहिलो पटक प्ले-अफ पुग्न असफल भएपछि अन्य ७ वटै टिम प्ले-अफ रेसमा रहेका छन्। अंकतालिकाको पुछारबाट लगातार ५ जित पछि पन्जाबले सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै प्ले-अफ सम्भावना जोगाएको छ भने हैदरावाद, कोलकाता र राजस्थान पनि प्लेअफ पुग्न सर्वस्व दिने पक्षमा छन्। आउनुस जानौ प्ले-अफ पुग्ने कुन टिमको सम्भावना कति छ र कस्तो समीकरण आवस्यक छ –
चेन्नाई इतिहासमै पहिलो पटक प्लेअफ पुग्न असफल भैसकेको छ।
प्रदर्शनमा एक रुपता नरहेको राजस्थानको १२ खेलमा १० अंक रहेको छ र छैठौं स्थानमा रहेको छ। राजस्थानले बाँकी २ मध्ये १ खेल हारेको खण्डमा प्ले-अफ पुग्न असफल हुनेछ। लिगमा रहीरहन सबैभन्दा पहिले राजस्थानले बाँकी दुवै खेल जित्नु पर्नेछ। त्यसपछि हैदरावादले सबै ३ खेल जितेको खण्डमा र यदी कोलकाता र पन्जाबले चेन्नाईलाई पराजित गरेको खण्डमा उत्कृस्ट नेट रन रेट हुने टिम अघि बढ्नेछ। बैंगलोर, दिल्ली र मुम्बईले कम्तिमा एउटा खेल जित्नु पर्नेछ।
३. सनराइजर्स हैदरावाद
११ खेलमा ८ अंक रहेको हैदरावाद सातौँ स्थानमा छ। प्लेअफ पुग्नको लागि हैदरावादले बाँकी ३ वटै खेल जित्नुपर्नेछ र त्यति गर्दा पनि अन्य टिमको नतिजामा पनि भर पर्नुपर्नेछ।
यदी कोलकाता र पन्जाबले बाँकी २ मध्ये १ खेलमा हार बेहोर्नेछ तथा दिल्ली, मुम्बई र बैंगलोरले कम्तिमा एउटा खेल जित्नेछ भने यो अवस्थामा कोलकाता, पन्जाब र हैदरावादको समान १४ अंक हुनेछ जसपछि नेट रन रेटमा अघि हुने टिम प्ले-अफ पुग्नेछ।
यदी कोलकाता र पन्जाबले बाँकी सबै खेल जितेको खण्डमा दुवै टिमको १६ अंक हुनेछ। यदी त्यस्तो भयो भने दिल्ली , मुम्बई र बैंगलोर मध्ये २ वटा टिमले बाँकी सबै खेल हार्नुपर्नेछ। यस्तो भएको खण्डमा दिल्ली, मुम्बई र बैंगलोर मध्ये २ टिमको हैदरावाद जतिकै अंक हुनेछ जसपछि नेट रन रेटको आधारमा अघि हुने टिम प्ले-अफ पुग्नेछ।
यदी हैदरावादले बाँकी ३ खेल मध्ये १ खेल मात्र हारेको खण्डमा पनि प्ले-अफ रेसबाट बाहिरिनेछ।
कोलकाता १२ खेलमा १२ अंक सहित अंकतालिकामा पाँचौ स्थानमा रहेको छ।
यदी कोलकाताले बाँकी दुवै खेल जितेको खण्डमा र पन्जाबले पनि बाँकी दुवै खेल जितेको खण्डमा दुवैको अंक बराबरी हुनेछ। यस्तै मुम्बई, दिल्ली र बैंगलोर तिन वटै टिमले कम्तिमा एउटा खेल जितेको खण्डमा नेट रन रेटमा ५ टिम मध्ये नेट रन रेटमा उत्कृस्ट हुने ४ टिम प्लेअफ पुग्नेछ।
यदी कोलकाताले बाँकी २ मध्ये १ खेल जितेको खण्डमा तथा पन्जाबले पनि १ खेलमा हार्नुपर्छ। र यदी पन्जाबले बाँकी २ खेल जितेको खण्डमा कोलकाताले दिल्ली, मुम्बई र बैंगलोरले बाँकी सबै खेल हारोस् भन्ने कामना गर्नुपर्नेछ। यसो भएको खण्डमा नेट रन रेटमा अघि हुने टिम चौथो टिमको रुपमा प्ले अफ पुग्नेछ।
५. किंग्स-११ पन्जाब
अन्तिम ५ खेल जित्दै पन्जाब अंकतालिकामा चौथो स्थानमा रहेको छ।
यदी पन्जाबले बाँकी दुवै खेल जितेमा कोलकाताले दुवै खेल जिते पनि पन्जाब प्लेअफ पुग्ने सम्भावना प्रवल छ। पन्जाबले दुवै खेल जितेको खण्डमा तथा यदी कोलकाताले पनि बाँकी २ खेल जितेको खण्डमा र दिल्ली, मुम्बई र बैंगलोरले कम्तिमा एउटा खेल जितेको खण्डमा नेट रन रेटमा अघि हुने टिम प्लेअफ पुग्नेछ।
यदी पन्जाबले २ मध्ये १ खेलमा मात्र जित दर्ता गरेको खण्डमा कोलकाताले पनि एउटा खेल हारोस् भन्ने कामना गर्नुपर्नेछ। र यदी कोलकाताले पनि सबै खेल जितेको खण्डमा पन्जाबले दिल्ली, मुम्बई र बैंगलोरले सबै खेलमा हारोस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ। यो परिस्थितिमा नेट रन रेटमा अघि हुने टिम प्ले-अफ पुग्नेछ।
६. रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर
११ खेलमा १४ अंक सहित बैंगलोर तेश्रो स्थानमा छ।
बैंगलोरले बाँकी ३ मध्ये १ खेल जितेमा प्लेअफ पुग्नेछ। तै पनि, यदी कोलकाता र पन्जाबले बाँकी दुवै खेल जितेको खण्डमा र दिल्ली र मुम्बईले पनि कम्तिमा १६ अंक प्राप्त गरेको खण्डमा ५ वटा टिमको समान १६ अंक हुन् सक्छ। यो परिस्थितिमा नेट रन रेटमा अघि हुने टिम प्लेअफ पुग्नेछः।
यदी बैंगलोरले सबै ३ खेलमा हार बेहोरेको खण्डमा उसले पन्जाब, कोलकाताले पनि सबै खेल हारोस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ। यदी कोलकाता र पन्जाबले दुवै खेल जितेको खण्डमा भने मुम्बई र दिल्ली मध्ये एउटा टिमले सबै खेलमा हारको कामना गर्नुपर्नेछ जुन परिस्थितिमा पनि नेट रन रेटमा अघि हुने टिम प्लेअफ पुग्नेछ।
७. मुम्बई इन्डीएन्स
११ खेलमा १४ अंक रहेको मुम्बई पनि प्ले अफ पुग्न १ जित टाढा छ। तर त्यसको लागि बाँकी २ खेल विशाल अन्तरले भने हार्नु हुँदैन।
मुम्बईले बाँकी ३ खेल हारेको खण्डमा पनि मुम्बईको छनौट हुने सम्भावना रहन्छ। यदी दिल्ली र बैंगलोरले बाँकी खेलमा एउटा जित हात पार्यो भने दुवै टिम प्लेअफ पुग्नेछ भने प्ले अफ पुग्न २ वटा स्थान अझै बाँकि हुनेछ। त्यसको लागि कोलकाता र पन्जाबले कम्तिमा एउटा खेलमा हारको कामना मुम्बईले गर्नुपर्नेछ। त्यसो भए पन्जाब र कोलकातासंग अथवा राजस्थान र हैदरावादसंग अंक बराबरी हुनेछ जसपछि नेट रन रेटमा अघि हुने टिम प्लेअफ पुग्नेछ।
८. दिल्ली क्यापिटल्स
अंकतालिकामा ११ खेलमा १४ अंक सहित दिल्ली दोश्रो स्थानमा रहेको छ। दिल्ली, मुम्बई र बैंगलोरको समान जित र हार पछि १४ अंक रहेकोले दिल्लीको लागि पनि प्ले अफ पुग्ने परिस्थिति मुम्बई र बैंगलोरको जस्तै रहेको छ। एउटा जितले दिल्ली प्लेअफमा पुग्नेछ।